Electric Scooters, Electric Hamba, Carbon Fibre Electric Scooters - Motorow
Electric Scooters BUKA OKWENGEZIWE
emabhayisikili kagesi BUKA OKWENGEZIWE
SKATEBOARDS BUKA OKWENGEZIWE
HOVERBOARDS BUKA OKWENGEZIWE
ELECTRIC MOTORCYCLES BUKA OKWENGEZIWE
izinsimbi BUKA OKWENGEZIWE
Ngenxa ukushova uhlobo isikuta entsha kagesi, UWITGO S5 zamukela le design mqondo yakamuva cruise control, ubuchwepheshe, okuyinto kabanzi izimoto, ngakho abasebenzisi kungaba bube yinto engasho lutho phansi kanye isithuthuthu oyongena isimo isivinini esinesilinganiso. Ngaphandle, it ifakwe i-cruise control, lokusebenza ezintsha, okwenza kube ezihlakaniphile xaxa. Bheka buhlungu ngoba izici eziningi.
Shock Absorption Ukuze Comfort
Buka Zonke Scooters
UWITGO S6 kuyinto brand new isikuta kagesi okukhomba for ephakeme ukukhuthazela abasebenzisi ogibele. Lo mklamo kuhlanganiswe amandla okusezingeni eliphezulu umthamo webhethri, okungase ukuqinisekisa ogibele ibanga ongafinyelela afinyelela ku 70Km. Kususelwa ergonomic design theory, reinvent Umklamo foldable isikhwama esihlalweni, okungase ukukhulula ukukhathala abasebenzisi 'futhi ukwandisa isipiliyoni ugibele isithuthuthu. Bheka buhlungu ngoba izici eziningi.
Ukukhuthazela Super-okusezingeni eliphezulu
Ngenxa imodeli lula, UWITGO A5 ulula futhi ezincane. Aluminium ingxubevange noma carbon fibre izinto umzimba kungenziwa wakhetha amakhasimende. Isisindo aluminium ingxubevange isikuta kuyinto 7.5kg, kanye isisindo emzimbeni carbon fibre kuyinto 6.3kg kuphela. Kulula nesibaya, okulula ukuyiphatha, futhi asihambisani kahle uhambo iDemo. Bheka buhlungu ngoba izici eziningi.
I UWITGO CF1 zamukele ingxubevange magnesium njengoba Uhlaka lalo, elaliyisikhungo ukukhanya isisindo oqinile ngamandla, lokhu kwenza isisindo jikelele ibhayisikili 30% ngaphansana lonke market.The lonke ibhayisikili ngaphandle Welding, okwenza ebusweni ngaphezulu olubucayi. Hlakulela ultra-nomzimba omncane brushless motor, kungaphansi kwama-5% amandla ukulahlekelwa, ngaphezulu kwagezi nokwehlisa ukukhathala ngesikhathi ogibele.